MINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGY, INVITATION FOR OPEN TENDER
THE REPLUBLIC OF MYANMAR
1. Open Tender is invited to both Local and Foreign Companies for the purchase of 3,000 Metric Tons of Petroleum Coke in Myanmar Kyat from Petrochemical Complex (Thanbayarkan), Myanma Petrochemical Enterprise under Ministry of Electricity and Energy.
sop & tender announce.pdf
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံစု (သံပရာကန်) မှ ထွက်ရှိသည့် ရေနံမီးသွေး (၃,၀၀၀) မက်ထရစ်တန် (မက်ထရစ်တန်သုံးထောင်တိတိ)ကို စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူသည့်စနစ်ဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများမှ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
MPE_TLN Product 1and Mann .pdf
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) (၁၈ / ၂၀၁၇)
(၁၈ / ၂၀၁၇)
Thursday, December 28, 2017 - 16:30
ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်များ ရောင်းချရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၁)ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်စက်ရုံ (မင်းဘူး)မှ ပရိုပိန်းရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် ၁၀၀ တန်(တန်တစ်ရာတိတိ)၊ ဗြူတိန်းရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် ၁၀၀ တန်(တန်တစ်ရာတိတိ)နှင့် ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံစု(သံပရာကန်)မှ ဗြူတိန်းရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် ၂၀၀ တန်(တန်နှစ်ရာ တိတိ) စုစုပေါင်း ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် ၄၀၀ တန် (တန်လေးရာတိတိ) (ပရိုပိန်း - ၁၀၀ တန်၊ ဗြူတိန်း-၃၀၀ တန်) တို့ကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါ၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်တင်သွင်းသိုလှောင်သယ်ယူဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခွင့်လိုင်စင် လိုင်စင်(ခ) လက်ဝယ်ရှိသူများ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Announcement to sell_MPE.pdf
Draft REOI for YWAMA)_EPGE.pdf
Thursday, December 14, 2017 - 04:30
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၄)ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(မြောင်းတကာ)မှ (၁)လအတွင်းထွက်ရှိသော ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ၅,၀၀၀တန်(တန်ငါးထောင်)ခန့်အား (၁)လ အတွင်း ထုတ်ယူသည့်စနစ်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၅)ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(ကန်ကြီးထောင့်)မှ (၁)လအတွင်းထွက်ရှိသော ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ၅,၀၀၀တန်(တန်ငါးထောင်) ခန့်အား (၁)လ အတွင်း ထုတ်ယူသည့်စနစဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။